2012-03-18 ~ ညီနေမင်း ( နည်းပညာ )
saiayaroo@gmail.comး​အ​ကို ​ရေ Norton Internet Security 2012 key ​လေး​ရ​ရင်​လို​ချင်​လို့​ပါ။ ​မြန်​မာ ​တ​မျိုး​သား​လုံး​အ​တွက် ​တတ်​နိုင်​တဲ့ ​ဘက်​က ​တတ်​နိုင်​သ​လောက်​ကူ​ညီ​ပေး​နေ​တဲ့​အ​ကို့​ကို​လေး ​စား​ပါ​တယ်။
​ညီ​လေး​ရေ ၂၀၁၀၊ ၂၀၁၁၊ ၂၀၁၂ ​သုံး​မျိုး​သ​လုံး​စာ ​တင်​ပေး ​လိုက်​ပါ​တယ်. ​အောက်​မှာ Download ​လုပ်​လိုက်​ပါ။
Download ifile.it | mediafire | Mirrorcreator | Minus
​တောင်း​ထား​တဲ့ ​ညီ​လေး​တစ်​ယောက် ​ရှိ​လို့ ​တင်​ပေး​လိုက် ​ပါ​တယ်. ​နောက်​ဆုံး ​ထွက် version ​ပါ​ပဲ. driver scanner software ​ပါ. ​ဒီ software ​က ​မိ​မိ​စက်​မှာ ​လို​အပ်​နေ​တဲ့ Driver ​တွေ​ကို​ပါ ​ရှာ​ဖွေ​ပေး​နိုင်​ပြီး Download ​ပါ ​ဆွဲ​နိုင်​သည့် ​အ​ပြင်၊ update ​ပါ ​လုပ်​လို့​ရ​ပါ​တယ်. ​လို​အပ်​မယ်​ထင်​တယ်​ဆို​ရင်​တော့ Download ​သာ ​လုပ်​ထား​လိုက်​ပါ. Driver ​အ​တွက် ​လို​အပ်​နေ​တဲ့​သူ​များ ​ရှိ​နေ​တဲ့​သူ​များ ​အ​တွက်​ပါ။
Download ifile | Minus | Mirrorcreator
​ဟိုး​အ​ရင်​တုန်း​က ​ရေး​ပေး​ခဲ့​ဖူး​ပါ​တယ်. ​ဒါ​ပေ​မယ့် ​အ​ခု​အ​သေး ​စိတ် ​ပြန်​ပြီး​တော့ ​ရေး​ပေး​ပါ့​မယ်. ​ကျွန်​တော်​လက်​ရှိ ​ရေး​နေ​တဲ့ http://www.nyinaymin.org ​ဝဘ်​ဆိုက် ​ထဲ​မှာ ​တင်​ပေး​ထား​တဲ့ Download link ​အား​လုံး​ရဲ့ ​တစ်​ခု​ချင်း​စီ Download ​လုပ်​ပုံ​လုပ်​နည်း​ကို ​အ​သေး​စိတ်​ရေး​ပေး​သွား​မှာ​ပါ. ​သိ​တဲ့​သူ​များ ​အ​တွက်​တော့ ​အ​ရမ်း​လွယ်​ပေ​မယ့် ​အင်​တာ​နက် ​ဆို​တာ​ကို ​အ​ခု​မှ ​စ​ပြီး ​ထိ​တွေ့​တဲ့​သူ​များ​အ​တွက်​က​တော့ ​တစ်​ကယ့်​ကို ​ခက်​ခဲ​မှု ​တစ်​ခု​ပါ. ​အ​ခု Download link ​တွေ​ကို http://adf.ly ​ဆို​တဲ့ ​ဆိုက်​ရဲ့ Url Short link ​နဲ့ ​ချိတ်​ပြီး​တော့ ​တင်​ပေး​ထား​တာ​ပါ. ​ဘာ့​ကြောင့်​လဲ​ဆို​ရင် ​ကျွန်​တော် ​တင်​ပေး​ထား​တဲ့ software ​နာ​မည်​တွေ​ကို ​ရုတ်​တ​ရက် search engine ​က​နေ ​ရှာ​လို့ ​မ​တွေ့​အောင်​လို့ ​မြှုပ်​ထား​တာ ​ဖြစ်​ပါ​တယ်. search engine ​က​နေ ​ကျွန်​တော် ​တင်​ထား​တဲ့ ​ဖိုင်​ကို​တွေ့​သွား​ရင် ​ဘာ​ဖြစ်​နိုင်​သ​လဲ​လို့ ​မေး​လာ​ရင် ​ကျွန်​တော် ​တင်​ထား​တဲ့ Link ​တွေ​ဟာ free ​အ​နေ​နဲ့ latest version ​များ​ကို ​အ​ခ​မဲ့ ​ဖြန့်​ဝေ​ပေး​နေ​တာ​ဖြစ်​တဲ့​အ​တွက် ​တင်​ထား​တဲ့ ​ဆိုက်​က​နေ ​ဖိုက်​နာ​မည်​ကို ​ကြည့်​ပြီး​တာ​နဲ့ ​အ​ဖျက် ​ခံ​လိုက်​ရ​မှာ ​ဖြစ်​ပါ​တယ်. ​အ​ခု​လို Download link ​ကို ​မြှုပ်​ထား​တော့ ​ရုတ်​တ​ရက် ​ရှာ​လို့​မ​တွေ့​နိုင်​တော့​ပါ​ဘူး. ​အ​ရင်​ဦး​ဆုံး http://www.zshare.com ​ဆိုက်​က​နေ ​တင်​ထား​တဲ့ ​ဖိုင်​တစ် ​ဖိုင် Download ​လုပ်​ပုံ​လုပ်​နည်း​ကို ​ပြော​ပြ​ပါ့​မယ်. ​ဒီ​ပို့စ် ​ကို ​ဥ​ပ​မာ​ထား​ပြီး Download ​လုပ်​ရင်း​နဲ့ ​ရှင်း​ပြ​ပေး​သွား​ပါ့​မယ်.
​ကဲ​စ​ရ​အောင် ​အ​ရင်​ဆုံး ​ဒီ​ကို ​နှိပ်​လိုက်​ပါ. ​အောက်​က​ပုံ​တွေ​သေး​နေ​ရင် ​ပုံ​ကို​နှိပ်​လိုက်​ပါ ​ပုံ​ကြီး ​ထွက်​လာ​ပါ ​လိမ့်​မယ်.
​ရ​လာ​တဲ့ link ​မှာ ​ပုံ​ထဲ​က​အ​တိုင်း ziddu ​နဲ့ Download ​လုပ်​မှာ ​ဖြစ်​တဲ့​အ​တွက် ziddu ​ဆို​တဲ့ ​စာ​တမ်း​ကို ​နှိပ်​လိုက်​ပါ..
​ပြီး​ရင် http://adf.ly ​ဆိုက်​ကို ​ရောက်​သွား​ပြီး ​ပုံ​ထဲ​က​အ​တိုင်း ၅ ​စ​က္ကန့် ​စောင့်​ပေး​ပါ​ဆို​တဲ့ ​စာ​တမ်း ​တစ်​ခု​ပေါ်​လာ​ပါ​လိမ့်​မယ် . ​အဲ့​တော့ ၅ ​စ​က္ကန့် ​စောင့်​နေ​လိုက်​ပါ.
၅ ​စ​က္ကန့် ​ပြည့်​သွား​တာ​နဲ့ ​အောက်​က ​ပုံ​အ​တိုင်း Skip AD ​ဆို​တဲ့ ​စာ​တမ်း​ပေါ်​လာ ​ပါ​လိမ့်​မယ်. ​အဲ့​ဒီ့​ပေါ်​လာ​တဲ့ ​စာ​တမ်း​လေး​ကို ​နှိပ်​လိုက်​ပါ.
​အဲ့​ဒါ​ဆို​ရင် Ziddu ​ဆိုက်​ထဲ​ကို ​ရောက်​သွား​ပါ​လိမ့်​မယ်. ​အဲ့​မယ် ​ပုံ​ထဲ​က​အ​တိုင်း Download ​ဆို​တဲ့ ​အ​ကွက်​လေး​ကို ​နှိပ်​လိုက်​ပါ.
​ပြီး​တာ​နဲ့ ​အောက်​က ​ပြ​ထား​တဲ့ ​ပုံ​ထဲ​က​အ​တိုင်း ​ဘေး​ဖက်​မှာ​ရှိ​တဲ့ ​နံ​ပါတ်​အ​တိုင်း ​အ​ကွက်​ထဲ​မှာ ​ရိုက်​ထည့်​ပြီး​တော့ Download ​ဆို​တဲ့ ​အ​ကွက်​ကို ​နှိပ်​လိုက်​ရ​မှာ​ဖြစ်​ပါ​တယ်.
​အ​ခု​လို​မျိုး Download link ​တန်း​ပြီး ​ကျ​လာ​ပါ​လိမ့်​မယ် internet download manager ​တင်​ထား ​သူ​များ ​အောက်​က​ပုံ​အ​တိုင်း ​ကျ​လာ​ရင် Start Download ​ကို​နှိပ်​လိုက်​တာ​နဲ့ ​သူ့​ဟာ​သူ Download ​လုပ်​နေ​ပါ​လိမ့်​မယ်. internet download manager ​မ​တင်​ထား​သူ​များ​ကျ​တော့ ​ရိုး​ရိုး Save box ​လေး​ပေါ်​လာ​ပါ​လိမ့်​မယ်. ​ပေါ်​လာ​တဲ့ box ​က save file ​ကို ​နှိပ်​ပြီး Download ​လုပ်​လိုက်​ပါ..
​ကဲ​အား​လုံး​ပဲ ​အ​ဆင်​ပြေ​ကြ​လိမ့်​မယ်​လို့ ​မျှော်​လင့်​ပါ​တယ်.
​ရ​လာ​တဲ့ link ​မှာ ​ပုံ​ထဲ​က​အ​တိုင်း zshare ​နဲ့ Download ​လုပ်​မှာ ​ဖြစ်​တဲ့​အ​တွက် zshare ​ဆို​တဲ့ ​စာ​တမ်း​ကို ​နှိပ်​လိုက်​ပါ..
​အဲ့​ဒါ​ဆို​ရင် Zshare ​ဆိုက်​ထဲ​ကို ​ရောက်​သွား​ပါ​လိမ့်​မယ်. ​အဲ့​မယ် ​ပုံ​ထဲ​က​အ​တိုင်း Download Now! ​ဆို​တဲ့ ​အ​ဝါ​ရောင် ​အ​ကွက်​လေး​ကို ​နှိပ်​လိုက်​ပါ.
​ဟိုး​အ​ရင်​တုန်း​က ​ရေး​ပေး​ခဲ့​ဖူး​ပါ​တယ်. ​ဒါ​ပေ​မယ့် ​အ​ခု​အ​သေး ​စိတ် ​ပြန်​ပြီး​တော့ ​ရေး​ပေး​ပါ့​မယ်. ​ကျွန်​တော်​လက်​ရှိ ​ရေး​နေ​တဲ့ http://www.nyinaymin.org ​ဝဘ်​ဆိုက် ​ထဲ​မှာ ​တင်​ပေး​ထား​တဲ့ Download link ​အား​လုံး​ရဲ့ ​တစ်​ခု​ချင်း​စီ Download ​လုပ်​ပုံ​လုပ်​နည်း​ကို ​အ​သေး​စိတ်​ရေး​ပေး​သွား​မှာ​ပါ. ​သိ​တဲ့​သူ​များ ​အ​တွက်​တော့ ​အ​ရမ်း​လွယ်​ပေ​မယ့် ​အင်​တာ​နက် ​ဆို​တာ​ကို ​အ​ခု​မှ ​စ​ပြီး ​ထိ​တွေ့​တဲ့​သူ​များ​အ​တွက်​က​တော့ ​တစ်​ကယ့်​ကို ​ခက်​ခဲ​မှု ​တစ်​ခု​ပါ. ​အ​ခု Download link ​တွေ​ကို http://adf.ly ​ဆို​တဲ့ ​ဆိုက်​ရဲ့ Url Short link ​နဲ့ ​ချိတ်​ပြီး​တော့ ​တင်​ပေး​ထား​တာ​ပါ. ​ဘာ့​ကြောင့်​လဲ​ဆို​ရင် ​ကျွန်​တော် ​တင်​ပေး​ထား​တဲ့ software ​နာ​မည်​တွေ​ကို ​ရုတ်​တ​ရက် search engine ​က​နေ ​ရှာ​လို့ ​မ​တွေ့​အောင်​လို့ ​မြှုပ်​ထား​တာ ​ဖြစ်​ပါ​တယ်. search engine ​က​နေ ​ကျွန်​တော် ​တင်​ထား​တဲ့ ​ဖိုင်​ကို​တွေ့​သွား​ရင် ​ဘာ​ဖြစ်​နိုင်​သ​လဲ​လို့ ​မေး​လာ​ရင် ​ကျွန်​တော် ​တင်​ထား​တဲ့ Link ​တွေ​ဟာ free ​အ​နေ​နဲ့ latest version ​များ​ကို ​အ​ခ​မဲ့ ​ဖြန့်​ဝေ​ပေး​နေ​တာ​ဖြစ်​တဲ့​အ​တွက် ​တင်​ထား​တဲ့ ​ဆိုက်​က​နေ ​ဖိုက်​နာ​မည်​ကို ​ကြည့်​ပြီး​တာ​နဲ့ ​အ​ဖျက် ​ခံ​လိုက်​ရ​မှာ ​ဖြစ်​ပါ​တယ်. ​အ​ခု​လို Download link ​ကို ​မြှုပ်​ထား​တော့ ​ရုတ်​တ​ရက် ​ရှာ​လို့​မ​တွေ့​နိုင်​တော့​ပါ​ဘူး. ​အ​ရင်​ဦး​ဆုံး http://www.mediafire.com ​ဆိုက်​က​နေ ​တင်​ထား​တဲ့ ​ဖိုင်​တစ် ​ဖိုင် Download ​လုပ်​ပုံ​လုပ်​နည်း​ကို ​ပြော​ပြ​ပါ့​မယ်. ​ဒီ​ပို့စ် ​ကို ​ဥ​ပ​မာ​ထား​ပြီး Download ​လုပ်​ရင်း​နဲ့ ​ရှင်း​ပြ​ပေး​သွား​ပါ့​မယ်.
​ရ​လာ​တဲ့ link ​မှာ ​ပုံ​ထဲ​က​အ​တိုင်း mediafire ​နဲ့ Download ​လုပ်​မှာ ​ဖြစ်​တဲ့​အ​တွက် mediafire ​ဆို​တဲ့ ​စာ​တမ်း​ကို ​နှိပ်​လိုက်​ပါ..
​အဲ့​ဒါ​ဆို​ရင် Mediafire ​ဆိုက်​ထဲ​ကို ​ရောက်​သွား​ပါ​လိမ့်​မယ်. ​အဲ့​မယ် ​ပုံ​ထဲ​က​အ​တိုင်း click here to start download from mediafire ​ဆို​တဲ့ ​အ​ပြာ​ရောင် ​စာ​တမ်း​ကို ​နှိပ်​လိုက်​ပါ.
​ဟိုး​အ​ရင်​တုန်း​က ​ရေး​ပေး​ခဲ့​ဖူး​ပါ​တယ်. ​ဒါ​ပေ​မယ့် ​အ​ခု​အ​သေး ​စိတ် ​ပြန်​ပြီး​တော့ ​ရေး​ပေး​ပါ့​မယ်. ​ကျွန်​တော်​လက်​ရှိ ​ရေး​နေ​တဲ့ http://www.nyinaymin.org ​ဝဘ်​ဆိုက် ​ထဲ​မှာ ​တင်​ပေး​ထား​တဲ့ Download link ​အား​လုံး​ရဲ့ ​တစ်​ခု​ချင်း​စီ Download ​လုပ်​ပုံ​လုပ်​နည်း​ကို ​အ​သေး​စိတ်​ရေး​ပေး​သွား​မှာ​ပါ. ​သိ​တဲ့​သူ​များ ​အ​တွက်​တော့ ​အ​ရမ်း​လွယ်​ပေ​မယ့် ​အင်​တာ​နက် ​ဆို​တာ​ကို ​အ​ခု​မှ ​စ​ပြီး ​ထိ​တွေ့​တဲ့​သူ​များ​အ​တွက်​က​တော့ ​တစ်​ကယ့်​ကို ​ခက်​ခဲ​မှု ​တစ်​ခု​ပါ. ​အ​ခု Download link ​တွေ​ကို http://adf.ly ​ဆို​တဲ့ ​ဆိုက်​ရဲ့ Url Short link ​နဲ့ ​ချိတ်​ပြီး​တော့ ​တင်​ပေး​ထား​တာ​ပါ. ​ဘာ့​ကြောင့်​လဲ​ဆို​ရင် ​ကျွန်​တော် ​တင်​ပေး​ထား​တဲ့ software ​နာ​မည်​တွေ​ကို ​ရုတ်​တ​ရက် search engine ​က​နေ ​ရှာ​လို့ ​မ​တွေ့​အောင်​လို့ ​မြှုပ်​ထား​တာ ​ဖြစ်​ပါ​တယ်. search engine ​က​နေ ​ကျွန်​တော် ​တင်​ထား​တဲ့ ​ဖိုင်​ကို​တွေ့​သွား​ရင် ​ဘာ​ဖြစ်​နိုင်​သ​လဲ​လို့ ​မေး​လာ​ရင် ​ကျွန်​တော် ​တင်​ထား​တဲ့ Link ​တွေ​ဟာ free ​အ​နေ​နဲ့ latest version ​များ​ကို ​အ​ခ​မဲ့ ​ဖြန့်​ဝေ​ပေး​နေ​တာ​ဖြစ်​တဲ့​အ​တွက် ​တင်​ထား​တဲ့ ​ဆိုက်​က​နေ ​ဖိုက်​နာ​မည်​ကို ​ကြည့်​ပြီး​တာ​နဲ့ ​အ​ဖျက် ​ခံ​လိုက်​ရ​မှာ ​ဖြစ်​ပါ​တယ်. ​အ​ခု​လို Download link ​ကို ​မြှုပ်​ထား​တော့ ​ရုတ်​တ​ရက် ​ရှာ​လို့​မ​တွေ့​နိုင်​တော့​ပါ​ဘူး. ​အ​ရင်​ဦး​ဆုံး http://ifile.it ​ဆိုက်​က​နေ ​တင်​ထား​တဲ့ ​ဖိုင်​တစ် ​ဖိုင် Download ​လုပ်​ပုံ​လုပ်​နည်း​ကို ​ပြော​ပြ​ပါ့​မယ်. ​ဒီ​ပို့စ် ​ကို ​ဥ​ပ​မာ​ထား​ပြီး Download ​လုပ်​ရင်း​နဲ့ ​ရှင်း​ပြ​ပေး​သွား​ပါ့​မယ်.
​ရ​လာ​တဲ့ link ​မှာ ​ပုံ​ထဲ​က​အ​တိုင်း ifile.it ​နဲ့ Download ​လုပ်​မှာ ​ဖြစ်​တဲ့​အ​တွက် ifile.it ​ဆို​တဲ့ ​စာ​တမ်း​ကို ​နှိပ်​လိုက်​ပါ..
​အဲ့​ဒါ​ဆို​ရင် ifile.it ​ဆိုက်​ထဲ​ကို ​ရောက်​သွား​ပါ​လိမ့်​မယ်. ​အဲ့​မယ် ​ပုံ​ထဲ​က​အ​တိုင်း Request Download Ticket ​ဆို​တဲ့ ​စာ​တမ်း​ကို ​နှိပ်​လိုက်​ပါ.
​တစ်​ကယ်​လို့​မှ Download link ​မ​ကျ​လာ​ခဲ့​ဘူး​ဆို​ရင်​တော့ ​အောက်​က​ပုံ​အ​တိုင်း if it doesn’t pleace click
here ​ဆို​တဲ့ ​စာ​တမ်း​ကို ​နှိပ်​လိုက်​ပါ Download link ​တန်း​ကျ​လာ​ပါ​လိမ့်​မယ်...
Mediafire ​တွင် ​ဒု​တိ​ယ​အ​ကြိမ်​မြောက်​ဖိုင်​အ​ဖျက်​ခံ​ရ​ခြင်း
Dear MediaFire User: MediaFire has received notification under the provisions of the Digital Millennium Copyright Act ("DMCA") that your usage ofafile is allegedly infringing on the file creator's copyright protection. The file named Portable_BB_FlashBack_Pro_v2.6.4.1293_by.nyinaymin.com.rar is identified by the key (nz2x5oyztdc). Asaresult of this notice, pursuant to Section 512(c)(1)(C) of the DMCA, we have suspended access to the file.
DMCA TAKEDOWN NOTICE Date: 19th March 2012 Dear Sir or Madam, It has been brought to my attention that your website is hosting unlicensed copies of copyrighted works published by Blueberry Software Ltd. 1. Identification of copyrighted works Copyrighted work(s): BB FlashBack screen recorder Copyright owner: Blueberry Software 2. Copyright infringing material or activity found at the following location(s) http://mediafire.com/?v9f9pa6sj3a8842 http://mediafire.com/?v5bj6nijbmppb27 http://mediafire.com/?nz2x5oyztdc http://mediafire.com/?zntwmywwmtn http://mediafire.com/?w68d2iy0rrav6db http://mediafire.com/file/bv7zaa919996bv5/BB http://mediafire.com/?lkwtwjcjli1et0r http://mediafire.com/?wmzzgk5tm5d http://mediafire.com/?myytwztgmta http://mediafire.com/?3mrzmyjcjhw http://mediafire.com/?3zzajvkwmog http://mediafire.com/?yj72u2b9mtw http://mediafire.com/file/dp9bko9rh3cdf98/BB.FlashBack.v2.6.7.Build.1344.zip http://mediafire.com/download.php?mdyzzgw2nm0 http://mediafire.com/?fj1stqx0gdm6m0a http://mediafire.com/download.php?ab511hdkb93177t http://mediafire.com/file/cul70301691a1q7/BB http://mediafire.com/?un9yoa15uu2ikz7 http://mediafire.com/?nymm5tkjlom http://mediafire.com/?kzzjznkejdl http://mediafire.com/?fqxxtb95rgkbr4q http://mediafire.com/?ricbwcqho7ulrc9 http://mediafire.com/?3wzc2na62aawppy http://mediafire.com/?m0yzjotzqnm http://mediafire.com/?yktqwziduuz http://mediafire.com/?luqwwj5zdym The above copyright work(s) is being made available for copying, through downloading, at the above location without authorization of the copyright owner. 3. Statement of authority The information in this notice is accurate, and I hereby certify under penalty of perjury that I am authorized to act on behalf of Blueberry Software Ltd, the owner of the copyright(s) in the work(s) identified above. I haveagood faith belief that none of the materials or activities listed above have been authorized by Blueberry Software Ltd, its agents, or the law. We hereby give notice of these activities to you and request that you take expeditious action to remove or disable access to the material described above, and thereby prevent the illegal reproduction and distribution of this copyright work(s) via your company's network. We appreciate your cooperation in this matter. Please advise us regarding what actions you take. Yours sincerely, Raspal Chima Bluerberry Software Ltd http://www.bbsoftware.co.uk The Bond 180-182 Fazeley Street Birmingham B5 5SE U.K. +44 (0)121 285 0200
Company Name: Bluerberry Software Ltd
Contact Name: Raspal Chima
Contact Email: raspal.chima@bbconsult.co.uk
​ဒီ​တစ်​ခါ​တော့ ​အား​လုံး ​သိ​ရ​အောင်​လို့ ​သူ​တို့ ​သ​တိ​ပေး​ပြီး ​ဖျက်​လိုက်​တဲ့​စာ​ကို​ပါ ​တစ်​ခါ​တည်း ​တင်​ပြ​ပေး​လိုက်​ပါ​တယ်. ​အား​လုံး ​သ​တိ​တ​ရ ​ရှိ​ဖို့​နဲ့ ​ဖိုင်​တင်​တဲ့​အ​ချိန်​မှာ ​ဖြစ်​နိုင်​ရင် software ​နာ​မည်​နဲ့ ​မ​တင်​မိ​ဖို့​အ​တွက် ​ဖော်​ပြ​ပေး​လိုက်​ပါ​တယ်.
​တ​ကယ်​လို့​သာ copyright ​နဲ့​ငြိ​ပြီး share hosting ​ဆိုက်​တွေ​သာ ​အ​ဖျက်​ခံ​ရ​တော့​မယ် ​ဆို​ရင်​တော့ ​နောက်​ဆုံး​အ​စီ​အ​စဉ်​အ​နေ​နဲ့ hosting ​တစ်​ခု ​မ​ဖြစ်​မ​နေ ​ဝယ်​ပြီး​တော့ ​တင်​ပေး​ဖို့​အ​ထိ ​စီ​စဉ်​ထား​ပါ​တယ်. ​မှတ်​ချက်​ပေး​တဲ့​နေ​ရာ​မှာ​ရော. ​မေးလ်​နဲ့​ပါ ​အား​တက်​သ​ရော ​ကူ​ညီ​ချင်​တဲ့ ​ညီ​ငယ်​များ ​ညီ​မ​ငယ်​များ ​ရှိ​သေး​တဲ့​အ​တွက် ​တ​ကယ်​လည်း ​ဝမ်း​သာ​မိ​ပါ​တယ်. ​အဲ့​လို​မေးလ်​တွေ​နဲ့ ​ကွန်​မန့်​တွေ​ကို ​ရ​လိုက်​တဲ့​အ​ချိန်၊ ​ဖတ်​လိုက်​တဲ့​အ​ချိန်​မှာ ​ရင်​ထဲ​မှာ ​အ​ရမ်း​ပျော်​သွား​မိ​ပါ​တယ်. ​ဒါ​ရင်​ထဲ​က ​စ​ကား​ပါ. ​ကျွန်​တော် ​ကျွန်​တော့်​သူ​ငယ်​ချင်း​နဲ့ ​တိုက်​ပင်​လိုက်​ပါ​ဦး​မယ်. ​ဘဏ်​ကို​လည်း ​မေး​ကြည့်​ပါ​ဦး​မယ်. ​အ​ဆင်​ပြေ​တယ်​ဆို​ရင်​တော့ ​ဘဏ်​အ​ကောင့်​နဲ့ ​လှူ​တဲ့​သူ​ရဲ့ email ​လိပ်​စာ​နဲ့​နာ​မည်​ကို (​နာ​မည်​အ​မှန်​မ​ထည့်​ချင်​သူ​များ၊ gmail ​တွင်​ပေး​ထား​သည့် ​နာ​မည်​ကို​လည်း ​ပေး​နိုင်​ပါ​တယ်) ​စာ​ရင်း​နှင့်​တ​ကွ ​ဖော်​ပြ​ပေး​မှာ​ပါ. ​အဲ့​ဒီ့​လှူ​ထား​တဲ့ ​ငွေ​ကို​တော့ ​ကျွန်​တော် share hosting ​တစ်​ခု ​လုပ်​ဖို့​အ​ထိ​တော့ ​ရည်​မှန်း​ထား​ပါ​တယ်. 2000 (​နှစ်​ထောင်) ​တတ်​နိုင်​သည့်​သူ​များ​လည်း ​အား​မ​ငယ်​ပါ​နဲ့ ​လှူ​လို့​ရ​ပါ​တယ်. ​ပိုက်​ဆံ​နည်း​လို့ ​နာ​မည်​မ​ထည့်​ချင်​သူ​များ​လည်း ​ကျွန်​တော့်​ကို ​နာ​မည်​တစ်​ခု​ခု​သတ်​မှတ်​ပြီး​တော့ ​ပေး​ပေး​ပါ. ​အဲ့​နာ​မည်​နဲ့ ​လှူ​ငွေ​ကို ​စာ​ရင်း​နှင့်​တ​ကွ ​ဝဘ်​ဆိုက်​မှာ ​လူ​တိုင်း​မြင်​နိုင်​အောင် ​ကျွန်​တော် ​စီ​စဉ်​ထား​ပါ​တယ်. share hosting ​လုပ်​ဖို့​အ​တွက် ​နည်း​ပ​ညာ​ပိုင်း ​ကျွမ်း​ကျင်​သူ​များ ​ဝဘ်​ဆိုက်​ပိုင်း​နှင့် hosting ​ပိုင်း​ကျွမ်း​ကျင်​သူ​များ​လည်း ​ပါ​ဝင်​လို့​ရ​ပါ​တယ်. ​အား​လုံး​ငြှိ​နှိုင်း​ပြီး ​လုပ်​သွား​ရင် ​အ​ဆင်​ပြေ​သွား​မှာ​ပါ. ​အ​လှူ​ငွေ​နှင့် share hosting ​အ​တွက် ​ကုန်​ကျ​ငွေ​များ​ကို ​ကျွန်​တော် ​တင်​ပြ​ပေး​သွား​မှာ​ပါ. ​လုပ်​ဖို့​က​တော့ ​အ​များ​ကြီး​ရှိ​ပါ​တယ်. ​ကူ​ညီ​မယ်​လို့​မေးလ်​ပို့​တဲ့ ​ညီ​လေး​နဲ့ ​ညီ​မ​လေး​တွေ​ရော ​ကွန်​မန့်​ပေး​ကြ​တဲ့ ​ညီ​လေး​နဲ့ ​ညီ​မ​လေး​တွေ​ရော ​အ​ထူး​ပဲ ​ကျေး​ဇူး​တင်​ပါ​တယ်. ​မ​လှူ​လည်း​ပဲ ​ကျွန်​တော် ​တတ်​နိုင်​သ​လောက်​တော့ ​လုပ်​ပေး​သွား​ဖို့ ​ဆုံး​ဖြတ်​ထား​ပြီး​သား​ပါ. ​ဒါ​ပေ​မယ့် ​စ​ကား​ပုံ​ရှိ​ပါ​တယ် ​နှမ်း​တစ်​လုံး ​ကောင်း​ယုံ​နဲ့ ​ဆီ​မ​ဖြစ်​နိုင်​ပါ​ဘူး​တဲ့. ​အဲ့​စ​ကား​ပုံ​လို​ပဲ. ​နှမ်း​စေ့​လေး​တွေ​များ​သွား​ရင် ​အ​လို​လို ​ဆီ​ဖြစ်​သွား ​မှာ​ပါ. ​အ​လှူ​ငွေ​ဆို​တာ ​လှူ​တဲ့​သူ​အ​တွက် ​ကု​သိုလ်​ရ​ပေ​မယ့် ​ထိန်း​သိမ်း​ရ​တဲ့ ​သူ​အ​တွက်​တော့ ​မီး​ခဲ​ကိုင်​ရ​သ​လို​ပါ​ပဲ. ​ဘာ​လို့​လဲ​ဆို​ရင် ​လှူ​လိုက်​တဲ့ ​အ​လှူ​ငွေ​ကို ​အ​လွဲ​သုံး​စား​ဖြစ်​စေ၊ ​လို​အပ်​လို့​ဖြစ်​စေ ​သုံး​စွဲ​မိ​သွား​ရင် ​အဲ့​ဒါ ​မီး​ခဲ​ကို ​မျို​ချ​ရ​သ​လို​ပါ​ပဲ. ​ကော့​သောင်း​က ​ကျွန်​တော့်​သူ​ငယ်​ချင်း​များ​နှင့် ​တစ်​ခြား​သူ​များ​လည်း ​ကျွန်​တော့်​ဆိုင်​အ​ခြေ​အ​နေ​နဲ့ ​ဘယ်​လို​လုပ်​ဆောင်​မယ်​ဆို​တာ​ကို ​သိ​ချင်​သူ​များ ​မေးလ်​ဖြင့်​ဖြစ်​စေ၊ ​ဖုန်း​ဖြင့်​ဖြစ်​စေ၊ ​လူ​ကိုယ်​တိုင်​ဖြစ်​စေ ​လာ​ရောက်​ပြီး ​ဆက်​သွယ်​နိုင်​ပါ​တယ်. ​လှူ​ဒါန်း​ထား​သူ​များ ​ဖြစ်​နိုင်​လျှင် ၂ ​ထောင်​နိုင်​သည် ​ဖြစ်​စေ ၃ ​ထောင်​နိုင်​သည်​ဖြစ်​စေ ​လှူ​လို့​ရ​ပါ​တယ်. ​အ​ခု​ပြု​လုပ်​မယ့် share hosting ​သည် ​တစ်​ဦး​တစ်​ယောက်​အ​တွက် ​မ​ဟုတ်​ဘဲ ​အ​များ​အ​တွက် ​ဖြစ်​သော​ကြောင့် ​ကို​တတ်​နိုင်​သ​လောက် ​လှူ​ဒါန်း​လို့​ရ​ပါ​တယ်. ​မေးလ်​ဖြင့် ​မေး​မြန်း​ချင်​လျှင် ​လှူ​ဒါန်း​လိုက်​သည့် ​အ​ကြောင်း​ပေး​ပို့​လို​လျှင် sharehosting.donate@gmail.com ​သို့ ​ပေး​ပို့​နိုင်​ပါ​တယ်။
Nyi Nay Min Computer & Printer
Training, Sale & Service Center
No(167), Mya Ye Palal Road,
Padauk Shwe War Quarter,
Kaw Thaung Township
Tanintharye Devision, Myanmar
Phone ... +066862735597
KBZ BANK (Myanmar)
Bank Phone 059-51938, 059-51939
Account no. 0111210054272
​လူ​ဆို​တာ ​သေ​သွား​ရင် ​မိ​မိ​မြတ်​မြတ်​နိုး​နိုး​တန်​ဖိုး​ထား​တဲ့ ​ပ​စ္စည်း​မ​ပြော​နဲ့ ​လက်​က ​ပတ်​ထား​တဲ့ ​နာ​ရီ​ကို​တောင် ​အ​ကုန်​ချွတ်​ထား​ခဲ့​ရ​ပါ​တယ်. ​ကို​သယ်​သွား​နိုင်​တာ​က ​တစ်​ခု​တည်း​ပါ၊ ​မိ​မိ​ပြု​လုပ်​ခဲ့​တဲ့ ​ကောင်း​မှု့​ကု​သိုလ်​တစ်​ခု​တည်း​ပါ။ ​ဘယ်​ဘာ​သာ​မှာ​ပဲ​ဖြစ်​ဖြစ် ​သတ်​မှတ်​ချက်​တစ်​ခု​ရှိ​ပါ​တယ်. ​ကောင်း​တာ​လုပ်​ရင် ​ကောင်း​တာ​ဖြစ်​မယ်၊ ​မ​ကောင်း​တာ​လုပ်​ရင် ​မ​ကောင်း​တာ​ဖြစ်​မယ်။ ​သူ​များ​အ​ပေါ် ​မ​လို​မုန်း​ထား​ပြီး ​အ​ကောက်​ကြံ​ရင် ​ကိုယ့်​အ​ပေါ်​ကို ​အ​ကောက်​ကြံ​တဲ့​သူ​လည်း ​အ​လို​လို ​ပေါ်​လာ​တတ်​တယ်​ဆို​တာ​ပါ​ပဲ။ ​ညီ​နေ​မင်း​ဆို​တာ ​ယ​နေ့ ​ပို့စ်​ရေး​နိုင်​တယ်။ ​ဖြေ​ပေး​နိုင်​တယ် ​ဆို​ပေ​မယ့် ​နိုင်​သ​လောက်​ကို ​ကူ​ညီ​ပေး​နေ​တာ​ဟာ ​နှာ​ခေါင်း​နှစ်​ပေါက်​က ​အ​သက်​ရှူ​နေ​ချိန်၊ ​နှ​လုံး​ခုန်​ပြီး ​အ​သက်​ရှင်​နေ​စဉ်​မှာ​ပဲ ​ပြု​လုပ်​ပေး​မှာ​ပါ။ ​ဘယ်​အ​ချိန်​သေ​မင်း​က ​ခေါ်​မယ်​ဆို​တာ​ကို ​ကျွန်​တော်​လည်း ​မ​သိ​ပါ​ဘူး။ ​သူ​လာ​ခေါ်​မယ့် ​အ​ချိန်​ကို ​ထ​မင်း​စား​ပြီး​တော့ ​ငုတ်​တုတ်​ထိုင်​စောင့်​နေ​ရ​တာ​ပါ. ​သူ​လာ​ခေါ်​ခဲ့​ရင် ​ကျွန်​တော်​သယ်​သွား​နိုင်​တာ​က ​တစ်​ခု​တည်း​ပါ။ ​အဲ့​ဒါ​က ​ကျွန်​တော်​လုပ်​ခဲ့​တဲ့ ​ကု​သိုလ်​တ​ရား​ပါ။ ​ကျွန်​တော် ​မ​တော်​မ​တ​ရား​တာ ​လုပ်​ခဲ့​မိ​ခဲ့​ရင်​တော့ ​အဲ့​ဒီ့​အ​ကု​သိုလ်​ကံ​က ​ကျွန်​တော်​ခံ​ရ​မှာ​ပါ။ ​အဲ့​ဒီ့​အ​တွက်​ကြောင့် ​အ​ကု​သိုလ်​တွေ ​နည်း​ပြီး ​ကု​သိုလ်​များ​အောင် ​လုပ်​ရင်း​နဲ့ ​သေ​မယ့်​နေ့​ကို ​စောင့်​နေ​တာ​ပါ. ​ကျွန်​တော်​ဝဘ်​ဆိုက်​ကို ​ကျွန်​တော်​သေ​သွား​သည့်​တိုင်​အောင် ​အ​နည်း​ဆုံး 20 ​နှစ်​လောက် ​ဆက်​ပြီး ​အ​သက်​ရှင်​နေ​ဖို့​အ​တွက် ​သက်​တမ်း​တိုး​ထား​မှာ​ပါ. ​တ​ကယ်​လို့ ​သေ​မယ်​ဆို​တာ​ကို ​သိ​လိုက်​တဲ့​အ​ချိန်​မှာ ​ဆက်​ပြီး​ရေး​နိုင်​ဖို့ ​ဝဘ်​ဆိုက် ​အ​သက်​ရှင်​နိုင်​ဖို့​အ​တွက် ​တစ်​စုံ​တစ်​ယောက်​ကို account ​နဲ့​သက်​ဆိုင်​တဲ့​အ​ရာ​အား​လုံး​လွှဲ​ပေး​ခဲ့​မှာ​ပါ. ​ကျွန်​တော် ​အဲ့​လောက်​အ​ထိ ​ကြို​တွေး​ထား​ပါ​တယ်. ​ဒါ​ပေ​မယ့် ​မိ​မိ​အ​သက်​ရှင်​နေ​စဉ် ​လူ့​ဘောင်၊ ​လူ့​လော​က​မှာ ​နေ​စဉ်​မှာ​တော့ ​ဘာ​ပဲ​လုပ်​လုပ် ​စေ​တ​နာ၊ ​ဂ​ရု​ဏာ​ရှေ့​ထား​ပြီး ​လုပ်​သွား​ဖို့​ပါ​ပဲ။ ​ဘာ​သာ​တွေ၊ ​အ​ယူ​ဝါ​ဒ​တွေ ​ကွဲ​ပြား​နေ​ပေ​မယ့် ​လူ​ဟာ​လူ​ပါ​ပဲ။ ​အဲ့​ဒီ့​လို ​လူ​ဖြစ်​နေ​ရ​တဲ့​အ​တွက် ​ဘယ်​ဘာ​သာ​ပဲ​ဖြစ်​ဖြစ်၊ ​ဘယ်​ဘာ​သာ​ပဲ ​ကိုး​ကွယ်​ကိုး​ကွယ် ​တစ်​နေ့​သေ​ရ​မှာ​ပါ​ပဲ. ​ဘာ​သာ​တိုင်း​ဟာ ​မိ​မိ​ရဲ့​ယုံ​ကြည်​ရာ​အ​လျှောက် ​ကောင်း​မှု့​ကု​သိုလ်​လုပ်​တာ​ဟာ ​နောက်​ဘ​ဝ​အ​တွက် ​ရည်​မှန်း​ပြီး​လုပ်​ကြ​တာ​ပါ. ​ဒီ​ဘ​ဝ​အ​တွက်​က​တော့ ​ခံ​စား​ထိုက်​ရင် ​ခံ​စား​ရ​ပါ​လိမ့်​မယ်။ ​ကျွန်​တော့်​ကို ​ညီ​တစ်​ယောက် ​မေး​ဖူး​ပါ​တယ်. ​အောင်​မြင်​ကျော်​ကြား​တဲ့ ​သူ​တစ်​ယောက် ​ဖြစ်​အောင် ​ဘယ်​လို​လုပ်​ရ​မ​လဲ​အစ်​ကို​တဲ့။ ​ကြိုး​စား​ရ​မှာ​ပေါ့ ​ဆို​တဲ့​ရေ​လဲ ​သုံး​နေ​တဲ့ ​စ​ကား​ကို ​ကျွန်​တော် ​မ​ပြော​လိုက်​ပါ​ဘူး. ​ကျွန်​တော်​ပြော​ပြ​လိုက်​တာ​က. ​ကို​ဝါ​သ​နာ​ပါ​တဲ့​အ​လုပ်​တစ်​ခု၊ ​အ​သက်​မွေး​ဝမ်း​ကျောင်း​ပ​ညာ​ရပ်​တစ်​ခု​ကို ​တစ်​စိုက်​မတ်​မတ်​နဲ့ ​စေ​တ​နာ​ရှေ့​ထား၊ ​ဝိ​ရိ​ယ​ထား​ပြီး ​လုပ်​ဆောင်​သွား​ဖို့​နဲ့ ​လက်​အောက်​ငယ်​သား​တွေ​အ​ပေါ်​ကို ​တတ်​နိုင်​သ​လောက် ​ကူ​ညီ​ပေး​ဖို့​ပါ။ ​လူ​ဆို​တာ ​ကြိုး​စား​တိုင်း ​မ​အောင်​မြင်​ပါ​ဘူး. ​တစ်​ချို့ ​ဆယ်​တန်း​ကို ​ဆ​ရာ​ဝန်​ဘွဲ့​လို​ချင်​လွန်း​လို့ ​နေ​မ​အား ​ည​မ​အား ​စာ​တွေ​အ​သေ​ကြည့် ​အ​သေ​ကျက်​ပါ​တယ်. ​ဒါ​ပေ​မယ့် ​ဖြစ်​ချင်​မှ​ဖြစ်​တာ​ပါ. ​ဦး​နှောက်​ရဲ့ ​မှတ်​သား​နိုင်​မှု့​ဟာ ​သူ့​ကို​ခိုင်း​တဲ့​အ​ပေါ်​မှာ​လည်း ​မူ​တည်​ပါ​တယ်. ​က​လေး​တစ်​ယောက်​ကို ​ဆန်​အိတ်​တစ်​အိတ် ​ထမ်း​ခိုင်း​လို့​ရ​လာ​တာ ​မ​ဟုတ်​ပါ​ဘူး.
​ကျွန်​တော့်​ကို ​လူ​သိ​များ​လာ​တာ. ​ဝဘ်​ဆိုက်​ကို ​လူ​သိ​လာ​တာ​ဟာ ​လုပ်​ယူ​ထား​တာ ​မ​ဟုတ်​ပါ​ဘူး. ​နာ​မည်​တစ်​ခု ​ရ​လာ​ဖို့​အ​တွက်​လည်း ​အ​စ​က​တည်း​က ​ရည်​ရွယ်​မ​ထား​ပါ​ဘူး. ​ဒါ​ပေ​မယ့် ​ဝဘ်​ဆိုက်​စ​လုပ်​တုန်း​က ​ကိုယ်​ရေး​ကိုယ်​တာ​အ​တွက် ​က​ဗျာ​လေး​တွေ ​တင်​ရင်း​နဲ့ ​နည်း​ပ​ညာ​ဆိုက်​ဖြစ်​သွား​တာ​ပါ. ​နည်း​ပ​ညာ​ဆိုက်​လို့​စ​ပြီး ​သတ်​မှတ် ​လိုက်​တာ​ဟာ ​ပို့စ် 1000 ​ကျော်​လောက်​က​မှ ​စ​ပြီး ​သတ်​မှတ်​လိုက်​တာ​ပါ။ ​မေး​လာ​တာ​တွေ ​ရှင်း​ပြ​နိုင်​ဖို့​အ​တွက် ​ကိုယ်​ကိုယ်​တိုင် ​စမ်း​တယ်. ​လေ့​ကျင့်​တယ်. ​လေ့​လာ​တယ်. ​အား​လုံး​အ​ဆင်​ပြေ​ပြီ. ​ဒီ​အ​ဖြေ​ဟာ ​သူ့​ပြ​ဿ​နာ​အ​တွက် ​ဖြေ​ရှင်း ​နိုင်​တယ်​ဆို​မှ ​ဝဘ်​ဆိုက်​ပေါ်​တင်​တာ​ပါ. ​ကျွန်​တော်​အ​ပင်​ပန်း​ခံ​တယ် ​မ​ခံ​ဘူး​ဆို​တာ ​ကျွန်​တော်​နဲ့ ​အ​တူ​နေ​ခဲ့​တဲ့ ​သူ​တိုင်း​သိ​ကြ​ပါ​တယ်. ​အဲ့​လို ​ကူ​ညီ​ရင်း​နဲ့ ​လူ​သိ​များ​လာ​ပြီး​တော့ ​ညီ​နေ​မင်း​ဆို​တဲ့​ဝဘ်​ဆိုက်​ကို ​အွန်​လိုင်း​ပေါ်​မှာ ​တစ်​ယောက်​နဲ့​တစ်​ယောက် ​လက်​ဆင့်​ကမ်း​လာ​ကြ​ရင်း​နဲ့ ​လူ​ကြည့်​များ​လာ​တာ​ပါ။ ​ဒါ​ဟာ ​လုပ်​ယူ​ထား​တာ ​မ​ဟုတ်​ပါ​ဘူး။ ​ကျွန်​တော်​ဆို​လို​ချင်​တာ​က ​ဒါ​ကို​ပြော​ချင်​တာ ​မ​ဟုတ်​ပါ​ဘူး. ​အ​လုပ်​တစ်​ခု​ကို​လုပ်​ရင် ​စေ​တ​နာ ​ရှေ့​တန်း​တင်​ပြီး​တော့​သာ ​အ​ဆက်​မ​ပြတ် ​လုပ်​သွား​ပါ. ​တစ်​နေ့​မှာ ​အောင်​မြင်​မှု့​ဆို​တာ ​ရ​လာ​မှာ​ပါ။ ​အ​သေ​အ​လဲ ​ကြိုး​စား​တိုင်း​လည်း ​ဖြစ်​မ​လာ​တတ်​ပါ​ဘူး။
Inbox ​ထဲ​က ​မေးလ်​အ​ကုန်​လုံး​ကို ​တစ်​ခါ​တည်း​နှင့် ​ဘယ်​လို​ဖျက်​ရ​လဲ
thantzinwin123@googlemail.com : ​အ​ကို​ညီ့​ကို ​တ​ခု ​ကူ​ညီ​ပေး​ပါ​လား ​ညီ့​မေးလ် inbox ​ထဲ​မှာ ​မေးလ်​တွေ ​အ​ရမ်း​များ​နေ​လို့​ပါ ​အ​ကုန်​လုံး​ကို ​တ​ခါ​တည်း ​ပျက်​လို့​ရ​မယ့် ​နည်း​လေး​ပြော​ပေး​ပါ​လား ​ခင်​မင်​လျက်​ပါ ​အ​ကို ​ကျေး​ဇူး​ပြု​ပြီး ​ပြော​ပြ​ပါ​နော် ..
​ကဲ​ကို​သန့်​ဇင်​ဝင်း​ရေ ​ဘာ​လို့ ​တစ်​ခါ​တည်း ​ဖျက်​ချင်​တယ် ​ဆို​တဲ့​အ​ကြောင်း​ကို ​မ​သိ​ပေ​မယ့် ​ဖျက်​လို့​ရ​တဲ့ ​နည်း​လမ်း​ကို ​ပြော​ပြ​ပေး ​လိုက်​ပါ့ ​မယ်. ​အောက်​မှာ ​သေ​ချာ​ရှင်း ​ပြ​ပေး​ထား​ပါ​တယ်. ​တစ်​ပုံ​ချင်း​စီ ​လိုက်​ကြည့်​လိုက်​လို့ ​ပါ​တယ်. video file ​နဲ့ ​မ​ရှင်း​ပြ​တာ​က ​ဒီ ​ကွန်​ပျူ​တာ​ထဲ​မှာ recoder software ​မ​ရှိ​လို့​ပါ. ​အ​ဆင်​ပြေ​မယ်​လို့ ​မျှော်​လင့်​ပါ​တယ်.
​လုပ်​နည်း​က ​လွယ်​ပါ​တယ်. Inbox ​ထဲ​က ​ဟာ​ကို ​အ​ရင် delete ​လုပ်​မယ်. ​ပြီး​တာ​နဲ့ trash ​ထဲ​က​နေ ​အ​ပြီး​ဖျက်​ပစ်​မယ်.
Inbox ​ကို ​နှိပ်​ပါ
Select All ​ကို ​အ​မှန်​ခြစ် ​ခြစ်​ပေး​လိုက်​ပါ။
Select All ? conversation in inbox (? = email ​အ​စောင်​ရေ​စု​စု​ပေါင်း)
​ပြီး​တာ​နှင့် Delete ​ကို ​နှိပ်​ပေး​လိုက်​ပါ.
"This action will affect all ? conversations in inbox. Are you sure you want to continue? " ​ဆို​ပြီး​တော့ Message Box ​ပေါ်​လာ​ရင်​တော့ Ok ​ပေး​လိုက်​ပါ . (? = email ​အ​စောင်​ရေ​စု​စု​ပေါင်း)
​အ​ခု Inbox ​ထဲ​က ​မေးလ်​တွေ ​ဖျက်​ပြီး​သွား​လို့ Trash ​ထဲ​ကို ​ရောက်​နေ​တဲ့ ​မေးလ်​တွေ​ကို ​အ​ပြီး​တိုင် ​ဖျက်​ပစ်​တော့​ပါ​မယ်.
Trash ​ကို ​နှိပ်​ပါ
Select All ? conversation in trash (? = email ​အ​စောင်​ရေ​စု​စု​ပေါင်း)
​ပြီး​တာ​နှင့် Delete Forever ​ကို ​နှိပ်​ပေး​လိုက်​ပါ.
"Confirm deleting Messages" ​ဆို​ပြီး Message box ​ပေါ်​လာ​ရင် Ok ​ပေး​လိုက်​ပါ.
​ကဲ ​ဒါ​ဆို​ရင်​တော့ ​ညီ​ဖျက်​ချင်​တဲ့ ​မေးလ်​တွေ​ကို ​ခ​ဏ​လေး​နဲ့ ​ဖျက်​လို့ ​ရ​သွား​ပါ​ပြီ. ​အ​ဆင်​ပြေ​မယ် ​လို့ ​မျှော်​လင့်​ပါ​တယ်.
Window ​တင်​ရာ​တွင် ​ဖြစ်​ပျက်​တတ်​သည့် ​ပြ​ဿ​နာ​များ​ကြောင့် ​မ​ဖြစ်​မ​နေ ​ပြောင်း​လဲ​ပြု​ပြင်​ပေး​ရ​မည့် ​အ​ချက်​များ​နှင့် ​လို​အပ်​သည့် software ​များ
sawnaybwe : hi bro, i would like to ask you about my Window problem. I using window7ultimate edition. The problem is when my computer is start it's always showing the message that Your Computer is Not Geuine. When i checked in properties it's activated. I tried to solve that problem by activated with the several Activators but it's not working.Could you pls help me how to solve it.
Looking forward to hearing from you. Thanks in Advance,
​ကို​စော​နေ​ဘွဲ့​ရေ window geuine ​လုပ်​တဲ့​နေ​ရာ​မှာ ​လို​အပ်​ချက်​လေး​တွေ​ကို ​ပြော​ပြ​ပါ့​မယ်. window geuine ​ကို window ​တင်​ပြီး​ပြီး​ချင်း geuine (​တစ်​နည်း​အား​ဖြင့် activated ​ဖြစ်​မ​ဖြစ်)​ကို ​ပ​ထ​မ​ဦး​ဆုံး ​စစ်​ဆေး​ရ​ပါ​မယ်. ​မ​ဖြစ်​ရင် window ​တင်​ပြီး​ပြီး​ချင်း ​တစ်​ခါ​တည်း Loader ​တစ်​ခု​ခု​ဖြင့် license version ​ဖြစ်​အောင် ​လုပ်​ပေး​ရ​မှာ ​ဖြစ်​ပါ​တယ်. ​ဘာ​လို့​လဲ​ဆို​ရင် . ​ကို​က window ​က activated ​မ​ဖြစ်​သေး​ဘဲ ​တစ်​နည်း​အား​ဖြင့် geuine ​မ​ဖြစ်​သေး​ဘဲ​နှင့် ​အင်​တာ​နက် ​ချိတ်​ပြီး ​သုံး​မိ​မယ်​ဆို​ရင် window update ​က ​တန်း​ပြီး​တော့ update ​လုပ်​တတ်​ပါ​တယ်. ​အဲ့​အ​ချိန်​ကျ​ရင် ​ကို​က ​မ​သိ​လိုက်​ဘဲ ​နေ​တတ်​ပါ​တယ်. window update ​လုပ်​ပြီး​တဲ့ ​အ​ချိန်​ကျ​မှ geuine ​ဖြစ်​အောင် ​လုပ်​တဲ့​အ​ခါ​ကျ​ရင် ​အ​ဆင်​မ​ပြေ ​အ​များ​ဆုံး​ဖြစ်​တတ်​ပါ​တယ်. ​အဲ့​လို​အ​ချိန်​ကျ​ရင် system restore ​ကို​ပြန်​သွား​ပြီး​တော့ ​ကို ​မ​သိ​ဘဲ​နှင့် window update ​လုပ်​လိုက်​တဲ့ ​ရက်​ကို ​လိုက်​ရှာ​လိုက်​ပါ. ​တွေ့​ပြီ​ဆို​တာ​နဲ့ window update ​မ​လုပ်​ခင် ​ရက်​တွေ​ထဲ​က ​တစ်​ရက်​ရက်​ကို ​နောက်​ဆုတ်​ပြီး restore ​လုပ်​ရ​ပါ​တယ်. ​ပြီး​တော့​မှ geuine ​ဖြစ်​အောင် ​လုပ်​မှ ​အ​ဆင်​ပြေ​သွား ​တတ်​ပါ​တယ်. ​အောက်​မှာ ​သိ​သင့်​တယ်​ထင်​လို့ ​ရေး​ပေး​လိုက်​ပါ​တယ်.
Window ​တင်​ပြီး​ပြီး​ချင်း ​ဘာ​စ​ပြီး​လုပ်​သင့်​သ​လဲ
​မိ​မိ​တင်​ထား​သော window ​သည် Thai (or) other Language version ​ဖြစ်​နေ​လျှင် thai keyboard ​နှင့် ​တစ်​ခြား setting ​ပိုင်း​တွေ​အား​လုံး​နီး​ပါး​ကို united state (or) English (US) ​ကို ​ပြောင်း​ပေး​ရ​ပါ​မယ်. ​အဲ့​အ​ပိုင်း​က​တော့ Control Panel >> Region and Language ​ထဲ​ကို ​ဝင်​ပြီး ​ပြင်​ပေး​ရ​ပါ​မယ်။ (​မ​ပြင်​ပေး​ရင်​တော့ software ​တင်​တဲ့​အ​ခါ​မှာ window ​အ​ခွေ​က Thai version ​ဖြစ်​နေ​လျှင် default ​က thai language ​ဖြစ်​နေ​တာ​မို့ Thai Language ​နှင့်​ပဲ install ​လုပ်​ခိုင်း​ပါ​လိမ့်​မယ်)
Start ​အ​ပေါ်​က search Programs and files ​က​နေ "window update" ​လို့ ​ရိုက်​ရှာ​လိုက်​ပြီး Window update ​ပေါ်​လာ​ရင် ​နှိပ်​လိုက်​ပါ. ​ပြီး​လျှင် Change settion ​ကို ​နှိပ်​ပြီး Recommended updates ​နှင့် Who can install updates ​အ​မှန်​ခြစ်​နှစ်​ခု​စ​လုံး​ကို ​ဖြုတ်၊ ​အ​ပေါ်​က Important updates ​အောက်​က ​အ​ကွက်​ကို ​နှိပ်​ပြီး "Never check for update(not recommended) ​ကို ​ရွေး​ပေး​လိုက်​ပါ. ​ပြီး​လျှင် Ok ​ကို ​နှိပ်​လိုက်​ပါ။
Kaspersky internet security 2012 ​တင်​ထား​တယ်​ဆို​ရင်​တော့ Control Panel >> Action center ​ကို​နှိပ်​ပြီး Change action center settings ​ကို​နှိပ်​ပြီး ​အဲ့​ထဲ​မှာ ​ရှိ်​တဲ့ ​အ​မှန်​ခြစ်​အား​လုံး​ကို ​ဖြုတ်​ပစ်​လိုက်​ပြီး OK ​ပေး​လိုက်​ပါ။ ​ဘာ​ကို​မှ ​အ​မှန်​ခြစ် ​မ​ထား​ထား​ပါ​နှင့် ​ပြီး​ရင် ​ကျွန်​တော် ​တင်​ပေး​ထား​တဲ့ Firewall ​ဖြစ်​တဲ့ ZoneAlarm PRO Firewall 2012 ​ကို install ​လုပ်​လိုက်​ပါ့. ​ဒီ​ပို့စ်​အောက်​ဆုံး​မှာ ZoneAlarm PRO Firewall 2012 ​ကို keygen ​နှင့်​ပါ ​တစ်​ခါ​တည်း ​တင်​ပေး​လိုက်​ပါ​တယ်. Keygen ​သုံး​နည်း​ကို ​မ​သိ​ရင် ​ဆိုက်​ရဲ့ ​ညာ​ဖက်​ခြမ်း​မှာ video file ​နဲ့ ​အ​သံ​ပါ ​ထည့်​ပြီး ​သေ​ချာ​ရှင်း​ပြ​ထား​ပါ​တယ်. download ​လုပ်​ပြီး ​ကြည့်​လိုက်​ပါ.
​ပြီး​လျှင် Control Panel >> Action center ​ထဲ​က User account control settings ​ကို​တော့ Default ​မှာ​ပဲ ​ထား​ထား​ပေး​ထား​ပါ. ​တစ်​ခါ​တစ်​ရံ​မှာ ​တစ်​ချို့​က software install ​လုပ်​ရာ​မှာ ​လွယ်​ကူ​စေ​ဖို့ never notify ​ဆို​ပြီး ​အောက်​ဆုံး​ကို ​ခ​ဏ​ထား​ထား​တတ်​ပါ​တယ်. software ​လည်း ​သွင်း​ပြီး​ရော Default setting ​ဖြစ်​တဲ့ ​ဒု​တိ​ယ​လိုင်း​မှာ ​ပြန်​ထား​ထား​ဖို့ ​သ​တိ​မေ့​နေ​တတ်​ပါ​တယ်. ​အဲ့​တစ်​ချက်​ကို​တော့ ​နည်း​နည်း​လေး ​သ​တိ​ထား​ပေး​စေ​ချင်​ပါ​တယ်.
Standard software ​တွေ ​တင်​ပြီး​သွား​ရင်​တော့ kaspersky internet security ၂၀၁၂ ​ကို 100% ​အ​ထိ update ​လုပ်​ဖို့ ​လုံး​ဝ(​လုံး​ဝ)​သ​တိ​မ​မေ့​ပါ​နှင့် ​အား​လုံး​အို​ကေ​ပြီး ​အ​စိမ်း​ရောင် ​ပြ​မှ​သာ ​အင်​တာ​နက်​သုံး​တာ​နှင့် ​အ​ခြား Hard disk ​အ​ပိုင်း​တွေ​ဖြစ်​တဲ့ D:/ ​တို့ ​တစ်​ခြား external Hard disk ​နှင့် Flash drive ​တွေ​ကို virus ​စစ်​ဆေး​ပါ.
​ကဲ​အား​လုံး ​အ​ဆင်​ပြေ​မယ်​လို့ ​မျှော်​လင့်​ပါ​တယ်. ​ပြော​ပြ​ချင်​တာ​က​တော့ ​အ​များ​ကြီး​ပါ​ပဲ. ​အ​ထူး ​သ​တိ​ထား​စေ​ချင် ​တာ​လေး ​လောက်​ကို​ပဲ ​ပြော​ပြ​ပေး​လိုက်​တာ​ပါ. ​အောက်​မှာ Firewall program ​ကို download ​လုပ်​လိုက်​ပါ. ZoneAlarm PRO Firewall 2012 latest version ​ပါ​ပဲ။
​အောက်​မှာ window7version ​အား​လုံး​နဲ့ ​စမ်း​ပြီး​ပါ​ပြီ. 32 bit ​ကော 64 bit ​ကော ​အ​ဆင်​ပြေ​ပါ​တယ်. ​မ​ပြေ​ဘူး​မ​လုပ်​ပါ​နဲ့. ​ကျွန်​တော် ​သုံး​နေ​တဲ့ Loader ​ပါ . ​အောက်​မှာ Download ​လုပ်​လိုက်​ပါ. ​သူ့​ကို apply ​ပေး​ပြီး​တာ​နဲ့ ​ခ​ဏ​နေ​ပြီး​သွား​ရင် restart ​တောင်း​ပါ​လိမ့်​မယ်. ​အဲ့​ဒီ့​အ​ခါ​ကျ​ရင် ​ပေး​လိုက်​ပါ. ​ခု​န​က ​ပြော​ထား​သ​လို​ပါ​ပဲ. ​ဒီ loader ​နဲ့ ​အ​ဆင်​မ​ပြေ​ရင် window update ​လုပ်​ထား​ပြီး​ပြီ​ဆို​တာ ၈၀% ​သေ​ချာ​ပါ​တယ်. ​အဲ့​အ​တွက်​ကြောင့် ​အ​ပေါ်​က ​ပြော​ထား​တဲ့​အ​တိုင်း system restore ​လုပ်​ပြီး​မှ loader ​သုံး​ပြီး activated ​ဖြစ်​အောင် ​လုပ်​ပါ.
Download ​ယi​ဂd0​ယ ​ရ L04dင်r (For All versions) 32 bit & 64 bit
​ခန့်​ဇော်​ဟိန်း : ​ကို​ညီ​ရေ USB DISK Security 6.1.0.432 ​ရဲ့ serial number ​လေး​လုပ်​ပါ​ဦး ​အစ်​ကို
​ညီ​လေး​ရေ ​ဖိုင်​ဆိုက်​က ​ငယ်​နေ​လို့ ​တစ်​ခါ​တည်း​ပဲ ​တင်​ပေး​လိုက်​ပါ​တယ်. ​ဒီ software ​က​တော့ autorun virus ​နှင့် ​အ​ခြား trojan ​အ​မျိုး​အ​စား virus ​များ​ကို ​တော်​တော် ​များ​များ ​သတ်​ပေး​ပါ​တယ်. ​အ​ခု ​နောက်​ဆုံး​ထွက် version ​ပါ​ပဲ. ​အ​ဆင်​ပြေ​မယ် ​လို့​မျှော်​လင့်​ပါ ​တယ်. ​အောက်​မှာ Download ​လုပ်​ယူ​လိုက်​ပါ.
Download ifile | Mediafire | Minus
​မ​ကြည့်​စေ​ချင်​တဲ့​ဆိုက်​တွေ ​ပိတ်​ဖို့ Anti-Porn 17.6.3.6
​နတ်​ဆိုး . ​မိ​မိ ​မ​ကြည့်​စေ​ချင်​တဲ့ ​ဆိုက်​တွေ​ကို ​ဘယ်​လို ​ပိတ်​ထား​ရ​မ​လဲ ​ကို​ညီ ​ကူ​ညီ​ပါ​ဦး​ဗျာ. ​ကျွန်​တော့်​မှာ ​အ​မ​တွေ​ရှိ​တော့ ​အ​ဆင်​မ​ပြေ​လို့​ပါ.
​တင်​ပေး​လိုက်​ပါ​ပြီ ​ညီ​လေး ​အ​ဆင်​ပြေ​မယ်​လို့ ​မျှော်​လင့်​ပါ​တယ်. Minus ​က​နေ​ဆို​ရင်​တော့ ​နှိပ်​လိုက်​တာ​နဲ့ ​တန်း​ပြီး Download link ​ကျ​လာ​မှာ ​ဖြစ်​ပါ​တယ်. ifile ​က​နေ ​ဆို​ရင်​တော့ ​စောင့်​ရ​မှာ​ဖြစ်​ပါ​တယ်. ​ကြိုက်​ရာ​ကို ​ရွေး​ပြီး Download ​လုပ်​ထား​သင့်​ပါ​တယ်. ​ကျွန်​တော် ​ဖိုင်​တွေ​ကို ​ယ​ခု​ထက်​ပို​ပြီး​တော့ ​သိမ်း​ဆည်း​ထား​စေ​ချင်​လျှင်၊ ​ဒါ​မှ​မ​ဟုတ် ​ကျွန်​တော် ​ဖိုင်​တွေ ​သိမ်း​ဆည်း​ဖို့ ​အ​ခု 1GB ​ပဲ ​ရ​သေး​ပါ​တယ်. ​ကျွန်​တော် invite ​လုပ်​ထား​တဲ့​သူ ​ဒါ​မှ​မ​ဟုတ် ​ကျွန်​တော့်​ရဲ့ invite link ​ကို ​နှိပ်​ပြီး account ​လုပ်​တဲ့​သူ ​များ​လာ​မှ​သာ​လျှင် ​ကျွန်​တော် ​သိမ်း​ဆည်း​နိုင်​မည့် space ​များ​ပြား​လာ​မှာ ​ဖြစ်​ပါ​တယ်. ​အဲ့​အ​တွက်​ကြောင့်​မို့ ​အား​လုံး​ပဲ ​ဖိုင်​တွေ​ကို Download link ​တွေ ​ကြာ​ရှည်​ခံ​နိုင်​အောင် http://min.us/rhFSgdv ​ကို ​နှိပ်​ပြီး account ​လုပ်​ထား​ပေး​ပါ. ​ဒါ​မှ​မ​ဟုတ်​ရင် ​ဆိုက်​ရဲ့​ညာ​ဖက်​ခြမ်း​က minus ​ပုံ​ကို ​နှိပ်​ပြီး​တော့ account ​တစ်​ယောက်​ကို ​တစ်​ခု​စီ​ပဲ ​လုပ်​ထား​ရင်​တောင် ​ကျွန်​တော် ​ဖိုင်​တွေ ​သိမ်း​ဆည်း​နိုင်​ဖို့ space ​တွေ ​များ​လာ​မှာ​ပါ. ​ဒီ​ဆိုက်​ဟာ Direct download link ​ကို ​ပါ ​ရ​တဲ့​အ​တွက်​ကြောင့်​မို့ ​အား​လုံး​အ​တွက် ​အ​ဆင်​ပြေ​အောင် account ​လုပ်​ခိုင်း​တာ​ပါ. ​ကျွန်​တော့် ​အ​တွက်​တင်​လည်း ​မ​ဟုတ်​ပါ​ဘူး. ​အ​ကောင့်​လုပ်​ထား​တဲ့ ​သူ​တွေ ​မည်​သူ​မ​ဆို ​အ​ခု​လို​မျိုး invite ​လုပ်​လိုက်​တာ​နဲ့ ​တ​ဖြည်း​ဖြည်း​ချင်း ​သိမ်း​ဆည်း​နိုင်​တဲ့ space ​တွေ ​များ​လာ​မှာ​ပါ. ​ပြီး​တော့ ​ကျွန်​တော် ​ပြော​သ​လို​ပါ​ပဲ. ​ဖိုင်​တွေ​တင် ​သိမ်း​ဆည်း​နိုင်​တာ​မ​ဟုတ်​ပါ​ဘူး. format ​တော်​တော်​များ​များ​ကို ​သိမ်း​ဆည်း​နိုင်​ပါ​တယ်. format ​ဆို​တာ​က​တော့ .mp4, .rar, .001, .exe ​အ​စ​ရှိ​သည်​ဖြင့် "." ​ရဲ့ ​နောက်​မှာ ​ဆုံး​တဲ့ ​အ​မည်​တွေ​ကို format ​လို့ ​ခေါ်​ဆို​တာ​ပါ. format ​တွေ​ဟာ ​တစ်​ခု​နဲ့​တစ်​ခု ​မ​တူ​ကြ​ပါ​ဘူး. ​ဘယ် program ​တွေ​ကို​ပဲ ​သုံး​သုံး ​သူ့​ရဲ့ ​ကိုယ်​ပိုင် format ​နဲ့ ​ဖိုင်​တစ်​ခု​တော့ ​ရ​လာ​မှာ​ပါ. ​ဥ​ပ​မာ adobe pagemaker ​နဲ့​သိမ်း​ရင် .pmd format ​နဲ့ ​ရ​လာ​သ​လို​မျိုး​ပေါ့. ​အား​လုံး​ပဲ ​အ​ဆင်​ပြေ​နိုင်​လိမ့်​မယ်​လို့ ​မျှော်​လင့်​ပါ​တယ် . ifile ​နှင့် mediafire ​က​တော့ ​ဒီ​ပုံ​စံ​အ​တိုင်း​ဆို ​ကြာ​ရှည်​ခံ​ဖို့ ​သိပ်​မ​လွယ်​တော့​လို့ ​အ​ခု​လို ​စီ​စဉ်​လိုက်​တာ​ပါ. ​တောင်း​ဆို​ထား​တာ ​အ​ရမ်း​များ​ပါ​တယ်. ​တစ်​ချို့ program ​တွေ​ဆို​ရင် 2GB ​လောက်​တောင် ​ရှိ​ပါ​တယ်. guitar pro ​ကို program ​နဲ့ keygen ​သာ ​တင်​ပေး​လိုက်​တာ. ​သူ​နဲ့ ​တွဲ​သုံး​ရ​မယ့် ​ဖိုင် ​မ​တင်​ပေး​နိုင်​ပါ​ဘူး. ​ဘာ​လို့​လဲ​ဆို​တော့ 1GB ​ကျော်​နေ​လို့​ပါ. ​အ​ခု ​ဒီ minus ​ဆိုက်​မှာ​လဲ 1GB ​ပဲ ​ရ​တဲ့​အ​တွက် ​တင်​ပေး​တဲ့​ဖိုင် 1GB ​ပြည့်​တာ​နဲ့ ​အ​ကောင့်​အ​သစ်​လုပ်​ရင် ​လုပ်​မ​လုပ်​ရင် ​ထပ်​တင်​ဖို့ ​မ​လွယ်​တော့​ပါ​ဘူး. .
Download Minus | Download ifile
Account ​တစ်​ခု ​မ​ဖြစ်​မ​နေ ​လုပ်​ထား​သင့်​တဲ့​ဆိုက်​ပါ
"​ကျွန်​တော့်​သူ​ငယ်​ချင်း ​ကို​ဇောင်း ​ပြော​ပြ​လိုက်​တာ​ပါ. ​ကို​ညီ​နေ​မင်း​က ​ဖိုင်​အ​များ​ကြီး ​တင်​တဲ့​သူ​ဆို​တော့ ​အ​ဆင်​ပြေ​ပါ​လိမ့်​မယ်​တဲ့" ​ကျွန်​တော် ​တစ်​ခု ​အ​ကြံ​ရ​မိ​ပါ​တယ်. ​အဲ့​အ​ကြံ​ဥာဏ်​လေး​ကို ​အား​လုံး​က​နေ ​လက်​ခံ​မယ်၊ ​ကူ​ညီ​ချင်​တယ်​ဆို​ရင်​တော့​ဖြင့် ​အ​တိုင်း​ထက် ​အ​လွန်​ဝမ်း​သာ​မိ​မှာ​ပါ. ​အ​ခု​ပြော​တဲ့​ဆိုက်​လေး​က ​ဖိုင်​တင်​ရ​တာ ​လွယ်​ကူ​တဲ့​အ​ပြင် ​သူ​ငယ်​ချင်း​တွေ ​များ​လာ​ရင်​လည်း ​ဖိုင်​သိမ်း​ဖို့ space ​များ​လာ​ပါ​လိမ့်​မယ်. ​အဲ့​ဒီ့​တော့ ​မိ​မိ​ရဲ့​ဖိုင်​တွေ​ကို ​သိမ်း​ထား​ချင်​တာ​ပဲ​ဖြစ်​ဖြစ်၊ ​ဒါ​မှ​မ​ဟုတ် ​တစ်​ခြား​သူ​ငယ်​ချင်း​တွေ​ကို file share ​ပေး​ချင် ​လို့​ပဲ​ဖြစ်​ဖြစ် ​အ​ကောင့်​တစ်​ခု​တော့ ​မ​ဖြစ်​မ​နေ ​လုပ်​ထား​သင့်​ပါ​တယ်. ​တစ်​ကယ်​လို့ ​ကျွန်​တော့်​ဆိုက်​ထဲ​က ​တစ်​ချို့ ​သေ​နေ​တဲ့၊ ​ကျွန်​တော် ​မ​သိ​သေး​တဲ့ link (Download ​လုပ်​မ​ရ​သော link ​ရှိ​ပါ​က) ​အ​ခု​ဖော်​ပြ​တဲ့ ​ဆိုက်​က​နေ ​အ​ကောင့်​လုပ်​ပြီး​တော့ Download link ​ကို ​ပေး​ပို့ ​ပေး​နိုင်​ပါ​တယ်. ​အဲ့​ဒီ့ ​တင်​ထား​ပေး​တဲ့ link ​အ​တိုင်း ​ဆိုက်​မှာ update ​အ​နေ​နဲ့ ​အ​စား​ထိုး​ပေး​သွား​မှာ​ပါ. ​ပြီး​တော့ software ​အ​သစ်​တွေ​ရှိ​လို့ ​ကျွန်​တော့်​ဆိုက်​မှာ ​တင်​ချင်​တယ်၊ ​ပို့စ်​အ​ဖြစ် ​ရေး​ချင်​တယ်​ဆို​ရင်​လည်း ​မေးလ်​ပို့​နိုင်​ပါ​တယ်. ​ကျွန်​တော့်​ဆိုက်​မှာ ​ဝင်​ရေး​လို့​ရ​အောင် ​ကျွန်​တော် ​စီ​စဉ်​ပေး​ပါ့​မယ်. ​ရေး​သား​သူ​နေ​ရာ​မှာ ​ပို့စ်​တင်​တဲ့​သူ​ရဲ့ ​နာ​မည်​ပဲ ​ပေါ်​မှာ​ဖြစ်​ပါ​တယ်. ​ရေး​သား​သူ ​ညီ​နေ​မင်း​လို့ ​မ​ပေါ်​ပါ​ဘူး. ​မိ​မိ​ကိုယ်​ပိုင်​နာ​မည် ​ဒါ​မှ​မ​ဟုတ် ​နာ​မည်​ဝှက်​တစ်​ခု ​ပေး​လဲ​ပဲ​ရ​ပါ​တယ်. ​ဆိုက်​ထဲ​မှာ ​ရေး​သား​မည့်​သူ​သည် ​သူ​များ​ဆိုက်​ထဲ​မှ ​ကူး​ယူ​ထား​သည့် link ​များ ​မ​ဖြစ်​ရ​ပါ. ​ကိုယ်​ကိုယ်​တိုင် ​ရေး​သား​ထား​သည့် ​စာ​များ​နှင့် ​ပုံ​များ​ဖြစ်​ရ​ပါ​မည်။ ​လို​အပ်​ပါ​က ​ပြန်​လည်​ပြင်​ဆင်​ပေး​သွား​မည်​ဖြစ်​ပါ​သည်။ ​ပို့စ်​အ​ရေ​အ​တွက် ​များ​များ​နှင့် ​အ​ကောင်း​ဆုံး​တင်​နိုင်​သူ​အား. ​ဝဘ်​ဆိုက်​တစ်​ခု ​လက်​ဆောင်​အ​ဖြစ် ​အ​ခ​မဲ့ ​ဖန်​တီး​ပေး​သွား​မည်​ဖြစ်​ပါ​သည်။
Linux, Mac, Window ​ကြိုက်​တဲ့ O/S ​က​နေ ​ဖိုင်​တင်​ခြင်း Download ​လုပ်​နိုင်​ခြင်း။
​ကျွန်​တော်​တို့ ​အ​သုံး​များ​တဲ့ browser ​များ​ဖြစ်​တဲ့ Firefox ​နှင့် Google Chrome ​ဖြင့် ​ကောင်း​မွန်​လျှင်​မြန်​စွာ ​အ​လုပ်​လုပ် ​ပေး​နိုင်​ခြင်း။
​မိ​မိ​ကြိုက်​နှစ်​သက်​ရာ MP3, MP4 ​နှင့် ​အ​ခြား movie format ​များ​ကို ​တင်​နိုင်​ခြင်း
​လူ​အ​များ​မျှော်​လင့်​နေ​ကြ​တဲ့ ​ဖုန်း software ​များ​ဖြစ်​ကြ​သော apk, .js, .sis ​နှင့် ​အ​ခြား​သော format ​များ​ကို ​တင်​နိုင်​ခြင်း။
​ပ​ထ​မ​ဦး​ဆုံး ​ဒီ​ကို ​နှိပ်​ပြီး website ​ကို ​အ​ရင်​သွား​လိုက်​ပါ။
​ပြီး​တာ​နှင့် ​အ​ပေါ်​မှာ ​ပြ​ထား​တဲ့​အ​တိုင်း ​ဆိုက်​ကို ​ရောက်​သွား​တာ​နဲ့ sign up ​ကို ​နှိပ်​ပြီး account ​အ​သစ်​လုပ်​ထား​လိုက်​ပြီး​တော့ ​ဖိုင်​တွေ​ကို ​သိမ်း​ဆည်း​လို့​ရ​ပါ​ပြီ. ​ဖိုင်​တွေ​ကို ​အ​ချိန်​ကြာ​မြင့်​စွာ ​သိမ်း​ဆည်း​ထား​နိုင်​ပါ​တယ်. ​သူ​ငယ်​ချင်း​တွေ​ကို ​ဖိတ်​ခေါ်​နိုင်​ရင် ​ပို​ပြီး​တော့ ​အ​ဆင်​ပြေ​ပါ​တယ်. ​ကျွန်​တော် ​နောက်​ပိုင်း ​အ​ခု​ဆိုက်​က​နေ​ပဲ ​တင်​ပေး​သွား​မှာ ​ဖြစ်​ပါ​တယ်. ​အောက်​မှာ ​ကျွန်​တော် ​တင်​ပြ​ထား​ပါ​တယ်. ​လုပ်​ဖြစ်​အောင် ​လုပ်​ထား​လိုက်​ပါ.
​ဖိုင်​ကို ​တင်​ပေး​ပြီး ​သူ​ငယ်​ချင်း​တွေ​ကို share ​ပေး​ချင်​ရင် direct download link ​ကို​ပါ ​ပေး​လို့​ရ​ပါ​တယ်.